Malmö Sweden oo laga furayo xarun lugu soo dhaweeyo gabdhaha gudan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Malmö Sweden oo laga furayo xarun lugu soo dhaweeyo gabdhaha gudan
Malmö Sweden oo laga furayo xarun lugu soo dhaweeyo gabdhaha gudan
Magaalada Malmö oo ah xarrunta seddaxaad ee dalka Sweden, ayaa laga furayaa xarun la sheegay in lugu soo dhaweeyn doono dumarka “horeey loo soo guday” Maamulka xagga caafimaadka u qaabilsan gobolkaasi ayaa toddobbaadkii ina dhaafay dabayaaqadiisi go’aan ku gaaray.
Xildhibbaanka lugu magacaabo Gilbert Tribo oo ah mudane ka tirsan golaha maamulka Skåne, oo soo xiganaya warbixin ay soo saartay hey’adda arrimaha bulshadda ee Socialstyrelsen ayaa sheegay in aannu maamulku heeynin tirro sax ah oo tilmaameeysa haweenka loo geeystay gudniinka ee ku nool goboladda Koonfureed hey’adda Socialstyrelsen.
“Sideey warbixintu sheegeeyso waa mid aad uga badan tirada sidaan fileeynay, waxaa jira tobanaan kun oo gabdho ah kuwaas oo ku nool dalka” ayuuu yiri isagoo tilmaamay sida aan loo heli karin tiro sax oo lugu sheegayo cadadka haweenka la guday.
Balse waxaa uu farta ku fiiqay in kal kaaliyeyaasha caafimaad ee iskuuladda oo la kulma gabadhan gudan eysan muuqan meel kale oo xogta ama tiradda u gudbin karaan.
Wuxuu xusay in ay waajib ku tahay waa sida uu hadalka u dhigay in dumarkaasi dhibanayasha ah ay helaan caawinaad sahleeysa sideey bulshada soo dhex gali lahaayeen maadama uu yiri “waxeey qabaan daqarro culus”, taasina uu tilmaamay mid ay fulinteeda ka saaran tahay waajib.
Ugu dambeyntiina wuxuu sheegay xildhibaanku in xarruntan lugu qaabilayo gabdhaha la guday filayo in albaabada loo furro sanadka soo socda ee 2018-ka haddii Eebbe idmo.